६९ कम्पनीले गरे लाभांश घोषणा, कसको कति ? (सूचीसहित) – Clickmandu
६९ कम्पनीले गरे लाभांश घोषणा, कसको कति ? (सूचीसहित)
क्लिकमान्डु २०७६ कार्तिक २१ गते ११:३७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्ला दिनमा धमाधम लाभांश घोषणा गरिरहेका छन् । उनीहरुले संस्थाको हैसियत अनुसार नै
लाभांश प्रस्ताव गरेका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गरेका हुन् । केहीले लाभांश घोषणा गरेर बुक क्लोजको मिति नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने केहीले लाभांश मात्रै घोषणा गरेका छन् ।
उनीहरुले घोषणा गरेको लाभांश लगानीकर्ताले भने सम्बन्धित कम्पनीको नियामक निकाय र उनीहरुको साधारण सभाले पारित गरेपछि मात्रै पाउने छन् । बिहीबारसम्म ६९ वटा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गरेका छन् । अहिलेसम्ममा लाभांश घोषणा गर्नेमा
वाणिज्य बैैंक १९, विकास बैंक ४, माइक्रोफाइनान्स कम्पनी ३७, जलविद्युत लगायत अन्य ७ वटा कम्पनी रहेका छन् । अन्य कम्पनीले पनि लाभांश घोषणा गर्ने क्रमलाई बढाएका छन् ।
नेप्सेमा सूचिकृत २७ वटा बाणिज्य बैंकमध्ये अहिलेसम्म १९ वटाले मात्रै लाभांशको घोषणा गरेका छन् । ९ वटा बैंकले अहिलेसम्म लाभांशको घोषणा गरेका छैनन् । लाभांश घोषणा गरेका बैंकहरुले यो वर्ष मेगा र स्टयान्र्डर्ड चार्टड बैंक र सिभिल बैंकले मात्रै नगद लाभांश दिएका छन् । बाँकी बैंकहरुले भने बोनस र नगद नै दिएका छन् ।
सेयर बजारमा गिरावट आइरहेको समयमा बैंकहरुले लगानीकर्तालाई बोनस दिँदा केही हदसम्म राहत महशुस हुने लगानीकर्ताको भनाई छ । सबै भन्दा बढी बोनस ग्लोबल आईएमई बैंकले दिएको छ भने बोनस र नगदसहित बढी लाभांश दिनेमा नबिल बैंक रहेको छ । नबिल बैंकले ३४ प्रतिशत लाभांश दिएको छ ।
यस्तै ३३ वटा विकास बैंकमध्ये ४ वटाले मात्रै लाभांशको घोषणा गरेका छन् । ३३ वटा बैंक नेप्सेमा सूचिकृत देखिएपनि केही बैंकहरु आपसमा मर्जरमा जान लागेका छन् । यसले गर्दा सबै विकास बैंकले लाभांश घोषणा नगर्ने देखिएको छ । अहिलेसम्म सबै भन्दा बढी मुक्तिनाथ विकास बैंकले बढी बोनस १७.६ प्रतिशत दिने घोषणा गरेको छ । गत आवको नाफाबाट शिवम् सिमेन्टले लगानीकर्तालाई निराश बनाएको छ । सिमेन्टले लगानीकर्तालाई बोनस नदिइ १५.७९ प्रतिशत नगद लाभांश दिने जनाएको छ ।
यता नेप्सेमा सूचिकृत ५० वटा माइक्रोफाइनान्समध्ये ३७ वटाले लाभांश घोषणा गरेका छन् । अब १३ वटाको मात्रै बाँकी रहेको छ । माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुमा लगानीकर्तालाई बढी लाभांश दिनेमा अहिलेसम्म नेशनल माइक्रोफाइनान्स रहेको छ । नेशनलले ७५ प्रतिशत बोनस र ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
जलविद्युत तर्फ चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनीले लाभांशको घोषणा गरेको छ भने बाँकी रहेका ३१ वटा जलविद्युत कम्पनीले लाभांश घोषणा गर्न बाँकी रहेको छ ।
२७ वाणिज्य बैंकमध्ये ९ वाणिज्य बैंकले आर्थिक वर्ष ७५÷७६ को साधारण सभा र लाभांश प्रयोजनाका लागि बुक क्लोज गरिसकेको अवस्था छ। बैंक अफ काठमान्डौ, सिटिजन्स बैंक, कुमारी बैंक, माछापुछ्रे बैंक, मेगा बैंक, एनआईसी एसिया, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक र सनराईज बैंकले साधरण सभा प्रयोजन लागि बुक क्लोज गरिसकेको अवस्था छ। अब दोश्रो बजारमा यी कम्पनीको शेयर किन्नेले आर्थिक वर्ष ७५/७६ को लाभांश प्राप्त गर्ने छैनन् ।